आईपीओ निष्कासनको क्रममा रहेका ८ बीमा कम्पनीको यस्तो छ वित्तीय अवस्था ! – Insurance Khabar
आईपीओ निष्कासनको क्रममा रहेका ८ बीमा कम्पनीको यस्तो छ वित्तीय अवस्था !
प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०७:४६
इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौं: पछिल्लो पटक व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका नौ जीवन बीमा कम्पनी मध्ये आठ बीमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण पस्केका छन् ।
पछिल्लो पटक सञ्चालनको अनुमति पाएको नौ कम्पनीमध्ये आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्सले भने हालसम्म वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छैन् । सार्वजानिक विवरण अनुसार ज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स बाहेक अन्य सबै कम्पनीको नाफा बढेको छ ।
चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा आधारित (खुद मुनाफा)
सर्बाधिक नाफा कमाउनेमा सन नेपाल लाईफ
चालू आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिक अवधिमा सबैभन्दा बढी सन नेपाल लाईफले नाफा कमाएको छ । यो अवधिमा कम्पनीले ११ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो त्रैमासमा ८ करोड १० लाख नाफा कमाएको कम्पनीले यो अवधिमा नाफा ४३ दशमलव ७० प्रतिशतले बढाएको हो । एक अर्व ४० रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको सन नेपाल लाइफले ५ हजार ५५२ बीमालेखबाट १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
नाफा बढाउनेमा रिलायन्स अगाडि
यो अवधिमा रिलायन्स लाइफले सर्वाधिक नाफा बढाएको छ । अघिल्लो त्रैमासमा ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले यो अवधिमा नाफा ९१ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढाएर १० करोड ६० लाख पुर्याएको छ । १ अर्ब ४७ करोड चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीले २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन छ ।
ज्योती लाईफको नाफा घट्यो
चालू आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा घटेको छ । पुस मसान्तमा ८ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले यो त्रैमासमा भने नाफा एक करोड ५६ लाखले घटाएर ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा खुम्चाएको छ ।
जीवन बीमा ब्यबसायको लागि शाखा विस्तार, व्यवस्थापन खर्च तथा संचालन खर्च बढेको कारण कम्पनीको मुनाफामा संकुचन आएको देखिन्छ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले यो अवधिमा ६ महिनामा २ हजार ८३३ वटा बीमा लेख जारी गरी ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । असोज ८ गतेदेखि औपचारिक रुपमा जीवन बीमा व्यवसाय शुरु गरेको ज्योतीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ तथा जगेडा कोषमा ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र जीवन बीमा कोषमा ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा आधारित (बीमाशुल्क आर्जन)
बीमा शुल्क आर्जनमा युनियन लाईफको अग्रता
सञ्चालनमा आएको छ महिनाको अवधिमा युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सले राम्रो व्यवसायिक सफलता प्राप्त गरेको छ । कम्पनीले चैत मसान्तसम्म ३९ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो त्रैमास पुसमसान्तसम्मको तुलनामा ९१ प्रतिशतले बढी हो । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले २० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शूल्क आर्जन गरेको थियो ।
यो अवधिमा नाफा ४२ प्रतिशतले बढाएर ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुर्याएको कम्पनीले ४८ करोड ६८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै कम्पनीले २२ हजार ६ सय ६७ बीमा लेखबाट २३ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको देखिन्छ । हालसम्म ४४ हजार ३६५ बीमालेख जारी गरेको कम्पनीले ४ बीमालेखको ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
सानिमा लाईफको बीमाशुल्क आर्जन १५ गुणाले वृद्धि
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा यो त्रैमासमा बीमा शुल्क आर्जन १५ गुणाले बढाएको छ । यो त्रैमासमा कम्पनीले २ करोड ४६ लाख ५५ हजार ८ सय ५३ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो त्रैमासमा २५ बीमालेखबाट १६ लाख ३२ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको सानिमा लाईफले यो अवधिमा ६५९ बीमालेखबाट उक्त रकमको बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो । पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै कम्पनीले ६ सय ३४ बीमालेखको २ करोड ३० लाखभन्दा बढीको बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो ।
मङ्सिर २२ गतेदेखि कारोबार सञ्चालनमा आएको सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा समितिबाट असोज ७ गते लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो ।